Momba ny fiviliana, ny fahaiza-manaony ary ny soatoavina - Valiny amin'ny lahatsoratr'i Prof. Yoram Yuval, "Tsy mivily izy ireo", Shabbat P. P. Akef - Tsanganana fitohizana (Tsanganana 26) - Raby Michael Avraham
Momba ny fiviliana, ny fahaiza-manaony ary ny soatoavina - Valiny amin'ny lahatsoratr'i Prof. Yoram Yuval, "Tsy mivily izy ireo", Shabbat P. P. Akef - Tsanganana mitohy (Tsanganana 26)
8 hevitra	/ 19 Elul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 19 / 09 / 2016
Ao anaty tsanganana ny teo aloha Naneho hevitra momba ny lahatsoratr'i Prof. Yoram Yuval aho tao amin'ny fanampin'ny Shabbat an'i Makor Rishon P. tamin'ity taona ity (XNUMX). Tokony ho hitanao ihany koa ny fifanakalozan-kevitra izay nivoatra tao amin'ny lahateny teo ambanin'ny lahatsoratro.
Ny valinteniko momba ny an'i Prof. Yuval dia navoaka tamin'ny dikan-teny nohafohezina tao amin'ny fanampin'ny Shabbat P. Ra'a (miaraka amin'ny Hevitra misimisy kokoa Mahaliana fa tena mendrika hovakiana avokoa izy rehetra ). Ireto ny teniko natao pirinty tao:
Momba ny fiviliana, ny fahaizana sy ny soatoavina
(Valin'ny lahatsoratr'i Prof. Yoram Yuval, "Tsy mivily izy ireo", fanampin'ny Shabbat P. Akev)
Ny lahatsoratr'i Prof. Yuval Luca dia misy fifangaroan-danja lehibe sy zava-misy. Misy dikany ny manamarika fa labozia teo an-tongotry ny raibeny nodimandry voalaza ao amin’ny lahatsoratra io fanavahana io, ary mampalahelo ny tsy firaharahany izany.
Mijoro amin'ny andry telo ny fanamarihany: 1. Modely ho an'ny fifandraisana lehibe sy matihanina. 2. Ny famaritana ara-tsaina ny fivilian-toetra ara-pananahana (tsy fahafahana mitia olona iray manontolo). Fanamafisana ara-tsiansa: Ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy dia tsy vokatry ny safidy fa avy amin'ny fototra organika, dia tena sarotra ny miova sy mampidi-doza ny manandrana. Efa voalaza eto amin'ny teny fohy: 3. Ny modely natolotr'i Yuval dia diso (jereo ny lahatsoratra amin'ny mitataovovonana G) ary tsy misy dikany amin'ny adihevitra eto. 1. Ny famaritana ara-tsaina ihany koa dia tsy mifandraika amin'ny adihevitra. 2. Ireo fanontaniana matihanina ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ny fifanakalozan-kevitra. Hazavaiko amin'ny antsipiriany izao.
Indray mandeha aho dia nipetraka tao amin'ny kollel tao Bnei Brak ary nisy mpianatra nanatona ahy ary nanontany raha rano na mafy ny vera. Nolazaiko taminy fa raha mifandray amin'ny lalàn'ny fitaratra Shabbat dia mafy, na dia matetika aza ny mpahay fizika no mamaritra azy io ho toy ny ranon-javatra ho an'ny filany matihanina. Ary ny fanoharana, raha ny psychiatry mamaritra ny firaisana ara-nofo fahadisoam-panantenana ho toy ny tsy fahafahana tia olona iray manontolo - ny henatra. Fa nahoana ny halacha na ny moraly no tokony handray ny famaritana matihanina ary hampihatra izany amin'ny ambaratonga normative ihany koa? Ankoatr'izay, ny famaritana dia tsy fikarohana empirical, noho izany dia tsy manana tombony amin'ny laika ny matihanina amin'ny fifandraisany amin'izy ireo. Ny mpitsabo aretin-tsaina dia afaka ary tokony hamaritra ny foto-kevitry ny filana matihanina, saingy tsy misy ifandraisany amin'ny fanontaniana ara-dalàna izany. Nanoratra i Michel Foucault fa ny diagnostika ara-tsaina dia tototry ny fiheverana ny sandany. Na dia anisan'ny nialoha lalana ny postmodernisme teo imasoko aza izy dia marina ny amin'izany. Eny, indroa isan'andro na ny famantaranandro mitsangana aza dia manondro ny fotoana mety.
Ny mpitsabo aretin-tsaina dia afaka mamaritra ny niandohan'ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy. Misy fototarazo, tontolo iainana, na hafa. Azony atao ny mamaritra raha azo tsaboina izany ary amin'ny fomba ahoana, ary inona no vokatry ny fitsaboana tsirairay. Fanapahan-kevitra matihanina daholo ireo, ary raha heverina fa misy ny fahalalana siantifika (ary azo antoka fa tsy feno amin'ity tranga ity, izay raha ny hevitro dia tsy dia manantitrantitra loatra amin'ny tenin'i Yuval), ny manam-pahaizana dia afaka manome valiny ho azy ireo. Fa ny fanontaniana hoe fiviliana ve izany sy ny fomba tokony hitondrana azy dia resaka famaritana normative fa tsy finiavana matihanina (jereo ny lahatsoratra etsy ambony).
Hevitra roa hafa:
A. Amin'ny maha manampahaizana kely momba ny aretin-tsaina aho, dia misalasala ny fanazavana naroson'i Yuval momba ny fiovan'ny toe-tsain'ny mpitsabo aretin-tsaina manoloana ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy. Raha ny hevitro dia fiovana amin'ny soatoavina indrindra izany fa tsy ara-tsiansa. Ny ampahany manan-danja amin'ny fiaraha-monina amin'izao fotoana izao dia mino fa ny trangan-javatra dia tsy ratsy ara-moraly (na ny kely aza dia manaiky izany) ary noho izany dia tsy mahita izany ho toy ny fiviliana. Ny psychiatrie eto dia tarihin'ny soatoavina ara-tsosialy, fa tsy ny mifanohitra amin'izany. Eritrereto ny kleptomania. Andeha hojerentsika ho an'ny tanjon'ny fifanakalozan-kevitra fa avy amin'ny fototarazo izy io ary tsy azo ovaina (niova fo). Midika ve izany fa tsy deviation ny kleptomania? Voarara sy mampidi-doza ny mangalatra, noho izany dia ara-drariny ny famaritana ny kleptomaniac ho mpanao ratsy. Izany dia na dia eo aza ny zava-misy fa na dia misy fironana hangalatra aza dia tsy midika fa tena mangalatra ilay olona (araka ny fanazavan'i Yuval momba ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy), ary na dia eo aza izany dia tsy azo tsaboina ary misy loharanon-karena voajanahary na voajanahary (araka ny noheveriko ho an'ny tanjona fifanakalozan-kevitra). Ny maha samy hafa ny kleptomania sy ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy dia ny ankamaroan'ny mpitsabo aretin-tsaina amin'izao fotoana izao dia mino fa azo atao sy tsy mampidi-doza ny homosexualité, fa ny halatra kosa dia voarara sy manimba eo imasony. Mazava amintsika fa soatoavina ireo fa tsy zava-misy.
B. Nanoratra i Yuval fa "ny lehilahy rehetra ara-pivavahana nahita fianarana" dia mahafantatra fa ao amin'ny toeram-pitsaboana marary dia afaka mandainga ny olona maty tanteraka izay mitempo ny fony. Heveriko fa olona tena nahita fianarana aho (ary tena mpivavaka ihany koa), ary tena tsy haiko izany. Ambonin’izany, na ny tenany aza tsy mahalala izany. Tsy misy ifandraisany amin'ny fanabeazana (na dia amin'ny fivavahana angamba eny), ostrich satria ny famaritana ny fahafatesana sy ny fiainana dia normative fa tsy klinika. Ny dokotera dia afaka mamaritra, raha ny zava-drehetra, inona no asa misy amin'ny toe-javatra toy izany, ary inona no fahafahana hiverina amin'ny fiainana ara-dalàna. Saingy tsy azony atao ny mamaritra na velona na maty ny olona toy izany, ary azo antoka fa tsy afaka manome taova (izay raha ny hevitro manokana dia azo atao ary tsy maintsy atao aminy mihitsy aza na dia heverina ho olona velona aza. Jereo ny lahatsoratra momba ny Kt). Valiny daholo ireo fa tsy fanontaniana tena misy. Dokotera isan-karazany izay mandà tsy hanaiky izany dia famantarana iray hafa fa ny fifangaroan'ny soatoavina sy ny zava-misy dia tsy hita ao amin'ny laika ihany.
Namaly izany ny Prof. Yuval tao amin'ny tranokala izay nanampy valiny ankapobeny ho antsika rehetra. Valiny manokana momba ny fanamarihako (ary koa ho an'i Dr. Azgad Gould) no natsangana Ao amin'ny tranokalany Ary izao no fiteniny:
Ho fanomezam-boninahitra ny Raby Dr. Michael Avraham
Ry Raby Shalom sy Bracha,
Voalohany, fantaro fa tena mankasitraka anao sy ny asanao ilay manao sonia. Tsy eto amin'ny tontolon'ny Torah aho ka afaka mankasitraka ny asanao Torah sy halakhic, fa ny neurobiology sy ny filozofia kely azoko dia ampy ho ahy hankafizako fatratra ny bokinao "Science of Freedom", izay heveriko fa asa eritreritra tany am-boalohany sy tsara tarehy.
Raha ampitahaina amin'ny fankafizako ny bokinao, dia mazava tsara ny valinteninao tsy mahafa-po avy amin'ny lahatsoratra "tsy mivily". Izany no maha-faly ahy amin'ny fanatsarana sasany nataoko teto, mba hiezaka handresy lahatra anareo ny amin'ny fahamarinan'ny teniko, ary raha tsy handresy lahatra, fara faharatsiny, manomboka manangana tetezana eo anelanelan'ny tendrombohitrao sy ny tendrombohitra. ny tendrombohitro. Andeha isika hanomboka amin'ny zavatra ekeko aminao:
Indroa aho no miombon-kevitra aminao (fa tsy indroa isan'andro) momba an'i Michelle Foucault. Samy mikasika ny postmodernisme, izay inoako ihany koa fa lahatsoratra poakaty, ary momba ny fahatapahan-kevitra momba ny diagnostika ara-tsaina, izay indrisy fa marina ny azy. Saingy mino aho, ary tsy azoko antoka fa eto ianao dia miombon-kevitra amiko, fa tsy azo atao raha tsy izany: voaozona amin'ny diagnostika ara-tsaina, amin'ny maha-izy azy, fa tsy ho afaka hiala amin'ny fiheverana sarobidy, farafaharatsiny tsy amin’ny hoavy. Ary noho izany, inona no azon'ny filozofa - mba hampisaraka ny fisarahana maranitra eo amin'ny soatoavina sy ny zava-misy, ny mpitsabo aretin-tsaina dia tsy afaka. Ary indrindra fa tsy afaka mamitaka ny tenany sy ny vahoaka izy fa misy - na mety misy - fisarahana tanteraka amin'ny sehatra misy azy. Mbola hiverina amin’izany aho any aoriana any.
Miombon-kevitra amin'ny famakafakana mafonja nataonao koa aho ilay fanontaniana momba ny sata halak'ilay lehilahy mandry am-ponja vonjimaika rehefa mitsahatra ny sainy ka tsy mandeha intsony, rehefa mitempo ny fony, ary nianatra zava-baovao mihitsy aza aho tamin'ireo zavatra nosoratanao tao amin'ny toko. lohatenin'ny lohahevitra amin'ny valinteninao. Ankoatra izany: Faly aho fa ny fehin-kevitra farany nataonao - fa tsy maintsy manome ny taovan'io lehilahy io - dia mitovy amin'ny ahy. Manantena aho fa hanohy hanararaotra ny toerana misy anao sy ny hery miasa mangina eo amin'ny Bnei Torah ianao mba hanovana ny toe-tsaina tsy mahalala - ary na dia ny hevi-diso aza - ny sasany amin'ireo mpitarika ny Jodaisma ultra-Orthodox sy ny fivavahana nasionaly momba ny olana.
Fa izay azonao atao momba ny fanavahana ny "velona" sy ny "maty", dia tsy azonao atao, araka ny hevitro, ny fanavahana ny "mivadika" sy ny "tsy mivadika". Hazavaiko ny teniko: Voalohany, mifanohitra amin'izay soratanao, ny dokotera sy ny maro hafa ny fomba hamaritana na velona na maty ny olona iray. Fantatro aloha izany. Fony aho niasa tao amin'ny sampan-draharaha misahana ny fitsaboana amin'ny maha-dokotera manam-pahaizana manokana, ny ampahany mampalahelo tamin'ny asako dia ny hamantatra, tamin'ny voalohany, ny fahafatesan'ireo marary izay nodimandry nandritra ny alina. Mbola tsaroako hatramin’izao ireo endrika maro nosaronako lamba fiomanana amin’ny fahatongavan’ilay mpiasa an-trano, izay tonga hitondra azy ireo amin’ny fiandohan’ny diany farany.
Saingy fantatro fa marina ny filazanao fa ny fanapahan-kevitra halakhic momba ny hoe iza no "velona" sy iza no "maty" dia mety tsy mitovy amin'ny finiavana ara-pitsaboana, ary tsy mivilivily izany na dia eo aza izany. Saingy ny fehin-kevitra implicit avy amin'ny valinteninao, fa tsy misy ifandraisany ihany koa ny famaritana ara-tsaina momba ny fiviliana sy ny famaritana ara-pinoana (ary azo antoka fa ny famaritana ara-tsosialy sy ara-pivavahana) ny fiviliana, dia tsy maneho ny zava-misy amiko.
Andeha horaisintsika ny kleptomania, izay nentinao ho fitsapana. Kleptomania dia tsy fiviliana. Aretina ara-tsaina. Ny teny hoe deviation dia natokana ho an'ny psychiatry, toy ny amin'ny fiteny an-dalambe, ho an'ny fitondran-tena tsy ara-dalàna, fa tsy hoe mankahala, amin'ny toe-javatra ara-nofo. Manantena aho fa tsy manandrana mampiasa ny famaritana matematika sy tsy miandany amin'ny famaritana ny fivilian-dàlana amin'ny fenitra (a.k.a. standard deviation) ianao, mba hanamafisana ny fihetsehan'ny toe-tsaina maharikoriko amin'ny Jodaisma ultra-Orthodox natsangana ho an'ny homosexualité.
Tsy ny "fitondran-tena" ihany no ifandraisan'ny psychiatrie fa ny trangan-javatra manara-penitra; Araka ny nosoratanao, ary faly aho fa eto ianao dia miombon-kevitra amiko, ny kleptomaniac dia tsy voatery hangalatra raha te ho kleptomaniac, ary ny homosexual dia tsy mila mandainga amin'ny lahy vao ho pelaka. Fa eto no mamarana ny fanoharana eo amin’ny fanoharana sy ny fanoharana. Ny kleptomaniac dia manimba sy manimba ny hafa amin'ny fitondran-tenany, ka ny fitondran-tenany dia tsy mety (tsy mivily), ary ny fiaraha-monina dia mahazo miaro amin'izany. Fanampin'izay: raha mangalatra zava-tsarobidy izy dia mety tsy hahatohitra azy eny amin'ny fitsarana ny aretiny ara-tsaina, ary eo amin'ny dingan'ny fanasaziana ihany no horaisina. Heveriko fa samy manaiky aho fa tsy mpanao heloka bevava ny lehilahy miray amin'ny lehilahy, ary raha tsy mandainga amin'ny lehilahy izy ireo - tsy mazava amiko ny maha-samihafa azy amin'ny lehilahy jiosy hafa rehetra, izay miatrika ny fandraran'ny Torah koa ny fanehoana ny firaisana ara-nofo.
Miverina amin'ny olana momba ny tsy fahafahana manasaraka tanteraka ny soatoavina amin'ny zava-misy sy ny zava-misy amin'ny psychiatry aho. Ny Kristiana katolika dia mino amin’ny finoana tanteraka fa ny mofo fiombonana noraisiny sy nohaniny nandritra ny lamesa dia lasa nofon’ny Mesia marina tao am-bavany. Hevitra diso ho an'ny tanjona sy tanjona rehetra izy io, ary miala amin'ny famaritana ny psychosis noho ny fenitra ara-tsosialy sy ny lanjany - olona an-jatony tapitrisa no mino izany. Ohatra tsy dia misy dikany izany, fa ny psychiatrie, raha ny famaritana, ny fitiliana ary ny fitsaboana ny trangan-javatra manara-penitra, dia mitsapatsapa lalina ao anatin'ny haizina momba ny fototry ny zava-misy ara-biolojika ho an'ireo tranga ireo.
Ho faly aho fa afaka mametraka ny asako eo amin'ny toerana ijoroan'ny fizika, saingy tsy hitranga izany mandritra ny androm-piainako, ary sao tsy hisy mihitsy. Araka ny fantatrao bebe kokoa avy amiko, fanontaniana filozofika fototra iray ao ambadik'ity olana ity, izay heveriko fa tsy misy valiny mahafa-po amin'izao fotoana izao, dia ny fanontaniana momba ny causality psychophysical: lalana iray na roa ve sa tsy mihatra amin'ny olana amin'ny rehetra? Ny raibeko izay nolazainao dia niatrika, tahaka anao, tamin'ny fanontaniana momba ny causality psychophysical, ary nino mihitsy aza fa tsy misy ary tsy mety ho vahaolana amin'izany (Ignorbimus - tsy fantatsika ary tsy ho fantatsika na oviana na oviana). Raha tsy misy mody sy tsy miezaka ny miditra ao anatin'izany eto, dia tena manohana ny hevitry ny mpianany, Prof. Yosef Neumann, izay nihevitra fa androany dia tsy misy vahaolana, fa rahampitso dia azo atao (Ignoramus - tsy fantatsika, fa mety ho fantatsika indray andro any).
Farany, te-hiverina avy amin'ny haavon'ny filozofia ho amin'ny tontolo maizin'ny pelaka ara-pivavahana aho. Nanoratra ny lahatsoratro aho taorian'ny tenin'ilay mpiara-miasa aminao Rabi Levinstein, izay nandroaka ireo olona tsara fanahy ireo ary nampalahelo azy ireo. Amin'ny fiafaran'ny andro, ny fanontaniana azo ampiharina izay mahaliana ahy, ary izay tsy nahitako reference mivantana sy manan-danja amin'ny valinteninao (ary manantena aho fa misy fanoharana toy izany), dia ny hoe misy ve ny fomba hamelana ireo pelaka ara-pivavahana ho velona sy hanomboka. fianakaviana ao amin'ny fiarahamonina Zionista ara-pivavahana. Raha vao tonga amin'ny olona tsy mandainga amin'ny lehilahy dia fanontaniana ara-tsosialy kokoa noho ny halakhic izany raha ny hevitro. Eto, raha ny hevitro, dia tokony hahatsiaro ny tenin'i Albert Einstein mpiara-miasa aminao ianao, izaho, ary ny mpamaky rehetra hoe: "Mora kokoa ny manapaka ny manjavozavo noho ny manapaka ny fitsarana an-tendrony."
Ary izao ny fandraisako eto ny teniny:
Ry Prof. Yuval, Salama.
Voalohany indrindra ho fanomezam-boninahitra ahy dia nankafizinao ny isako ary naneho ny fankasitrahanao teto mihitsy aza. Tena tsy mora amiko izany.
Eny tokoa, tsy niombon-kevitra tamin’izay nolazainao tao amin’ilay lahatsoratra aho, na dia tsy afaka milaza aza aho hoe tsy nankafy izany. Toy ny mahazatra, ny zavatra dia voasoratra tsara sy amin'ny fomba mazava sy tsara tarehy. Na izany aza, araka ny voalaza, na dia aorian'ny "tsisin'ny fanatsarana" (araka ny voalazanao), dia tsy miombon-kevitra amin'izy ireo aho, ary hiezaka ny hanazava eto aho ny antony.
Raha manaiky an'i Foucault isika (ny tiako holazaina dia ny teboka faharoa) dia tonga amin'ny fehin-kevitra iraisana voalohany isika fa ny psychiatry dia tototry ny fiheverana sanda ary mifototra amin'izany. Mazava ho azy fa manana refy tena zava-misy ihany koa izy io, saingy saika misy fanontaniana momba ny hasina sy ny kolontsaina foana ny farany.
Amin'ny fanekenao fa izany no zava-misy, tsy hitako izay lazainao fa ny fifandraisana misy eo amin'ny raby sy ny mpitsabo aretin-tsaina dia iharan'ny modelin'ny fifandraisana eo amin'ny matihanina sy ny raby. Na dia tsy hitan'ny psychiatrie ho toy ny fivilian-dàlana aza izany, dia mbola manaiky ianao fa tolo-bidy. Koa nahoana ny raby no tokony hanaiky izany ho finiavana matihanina? Mazava ho azy fa afaka manapa-kevitra izy fa hahazo izany, saingy fanapahan-kevitra halakhic izany ary tsy misy ifandraisany amin'ny fahefana matihanina. Raha ny modelin'ny raby versus professionnel dia efa niresaka tamiko ianao tamin'ny valinteniko voalohany Ho an'ilay lahatsoratra natokana ho an'ilay raharaha Amin'ny mitataovovonana m.
Avy eo dia nanampy ihany koa ianao fa tsy azo ihodivirana izany (fa ny psychiatry dia hampifangaro ny soatoavina amin'ny zava-misy). Na dia tsy matihanina aza aho dia mbola milaza fa tsy manaiky izany. Ahitsio aho raha diso aho, fa ny psychiatrie dia mety nifantoka tamin'ny zava-misy (amin'ny heviny midadasika, izany hoe ao anatin'izany ny teoria manazava azy, toy ny amin'ny siansa voajanahary), ary tsy misy hafa. Ohatra, mety ho afa-po amin'ny niandohan'ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy izy (ho ahy dia misy ihany koa ny fanombantombanana psychoanalytika araka izay irinao, raha toa ka ireo teoria miezaka manazava ilay tranga tsy misy sandany), ahoana dia mivoatra (ibid.), Aiza no manjaka, na ahoana ary ahoana no azo ovaina, ary inona no vidin'ny endrika fiovana rehetra (na "fiovam-po" tsy eto amintsika) toy izao sy izao. Fanontaniana mifandraika amin'ny zava-misy sy ny fandikana azy ireo, ary noho izany dia fanontaniana ara-tsiansa sy matihanina ara-dalàna. Amiko ireo fanontaniana rehetra ireo dia tsy voampanga amin'ny sandany rehetra. Etsy ankilany, tsy maintsy apetraka amin’ny fiaraha-monina sy ny olona rehetra ao anatiny ny fanontaniana hoe fiviliana na tsia.
Mazava ho azy fa raha ataonareo koa ny hoe "déviation" ho zava-misy amiko, toy ny fivilian-dàlana amin'ny norme statistika ("neutral mathematical definition", amin'ny fiteninao) dia ny psychiatrie no afaka mamaritra izany amin'ny fomba matihanina, fa efa niombon-kevitra ianao tamin'ny fanamarihanao teto fa tsy izany no izy. Amin'ny lafiny iray, miverina eto ianao ary manitsy ny maha-zava-dehibe ahy amin'ny teny hoe deviation, ary heveriko fa amin'ny fanaovana izany dia manandrana mandidy famaritana ara-tsaina ho an'ny fampiasana andavanandro indray ianao. Amin'ny fampiasana mahazatra any amin'ny distrika misy antsika, ny fiviliana dia fironana mahery (anaty?) amin'ny hetsika heloka bevava (toy ny ohatra momba ny kleptomania nifanarahana, ankoatra ny teny hoe "fiviliana"). Amin'ny fomba iray na hafa dia famaritana io, ka izany no nahatonga an'i Rabbi Levinstein sy ny tenako kely (izay tena lavitra ny fomba fijeriny amin'ny ankamaroan'ny zavatra) dia manaiky fa tsy misy toerana ho an'ny fandraisana fahefana matihanina momba izany. Inona no votoaty mivaingana amin'ilay foto-kevitra, ary tafiditra ao anatin'izany ve ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, izaho manokana dia mirona hieritreritra hoe tsy (satria raha ny hevitro dia ny fiviliana dia fironana amin'ny fanaovan-dratsy, fa tsy fironana amin'ny asan-jiolahy amin'ny heviny ara-pivavahana). Heveriko fa eny ny hevitr'i Rabbi Levinstein (satria araka ny hevitro dia fiviliana ihany koa ny fironana hanao heloka bevava amin'ny lafiny ara-pivavahana, angamba noho ny fahafantarany ny halakhah amin'ny fitondran-tena, izay laviko mafy ka tafiditra ao anatin'ny fikorontanan'ny toetr'andro).
Fehiny, tsy mahita antony eto amin'izao tontolo izao aho ho an'ny American Psychiatric Association na fikambanana matihanina hafa hamaritana ho antsika rehetra ny tokony hotsaboina sy ny tsy tokony hatao, ary inona ny fiviliana sy ny tsy tokony hatao. Izany dia tokony hapetraka amin'ny fiaraha-monina, ho an'ny olona tsirairay ho an'ny tenany, ary mazava ho azy koa ho an'ny mpitsabo aretin-tsaina manokana (mifanohitra amin'ny fikambanan'izy ireo matihanina). Izany hoe: ny fiaraha-monina no hanapa-kevitra raha misy zavatra manimba ny hafa (kleptomania, pédophilia, sns), ary avy eo dia tsy maintsy tsaboina na dia tsy naneho ny faniriany ho amin'izany ny marary (amin'ny tranga faratampony ampy). Amin'ny tranga tsy misy fahavoazana ara-tsosialy, ny olona ihany no hanapa-kevitra raha mila / mila fitsaboana izy na tsia. Ary mazava ho azy fa ilay mpitsabo aretin-tsaina nitodika tany aminy (fa tsy ny fikambanana) dia afaka milaza fa tsy vonona ny hitondra an'io raharaha io izy noho ny soatoaviny manokana. Na izany na tsy izany dia tsy mahita toerana ho an'ny fanapahan-kevitra iraisan'ny fikambanana matihanina momba ny olana toy izany aho.
Heveriko fa ity sary ity dia manazava ihany koa ny antony, araka ny hevitro, dia tena misy ary fandosirana amin'ny fampidirana ny refin'ny sanda amin'ny psychiatry. Raha ny fahazoako tsara indrindra amin'ity modely ity dia misoroka izany izahay, ka raha ny hevitro dia azo antoka fa afaka manavaka ny soatoavina sy ny zava-misy ny mpitsabo aretin-tsaina, toy ny fizika na filozofa. Koa satria tsy manam-pahaizana aho dia tsy isalasalana fa mety hisy fahadisoana amin'ireo teny ireo, ary ho faly aho raha manitsy ahy.
Toy izany koa ny toetry ny olona mandry ao amin’ny fikarakarana fatratra rehefa mitempo ny fony ary tsy miasa intsony ny sainy. Ny mpanohitra raha ny fahitako azy dia diso sy manimba ny fahitako azy dia tsy "tsy mahalala" araka ny voalazanao. Raha ny marina, tsy zava-misy na fahalalana na inona na inona ireo, ka noho izany dia toheriko ny fampiasana an'io teny io momba azy ireo. Raha ny hevitro dia diso ara-moraly izy ireo ka izay no mahatonga azy ireo hanimba. Averina indray, zava-dehibe amiko ny mitandrina amin'ny fanavahana ny soatoavina sy ny zava-misy. Izany indrindra no antony tsy ananan'ny dokotera sanda fanampiny mifandraika amin'io fanontaniana io.
Ny voalazanao tamin'ny fanamarihanao teto fa amin'ny fampiharana dia atolotra ny mpitsabo ity fanambarana ity dia tsy inona fa delegasiona ny fahefana, ary tsy misy afa-tsy. Tsy fanapahan-kevitra matihanina izany. Aza afangaro ny soatoavina sy ny zava-misy indray. Atolory amin'ny dokotera ny fanapahan-kevitra hamaritana ny fahafatesana (araka ny voalazanao momba ny tenanao amin'ny satrokao amin'ny maha-dokotera anao), saingy tsy midika izany fa fanapahan-kevitra tena izy-matihanina izany. Izany dia natao ho an'ny fanamorana sy ny fahombiazany fotsiny, ary raha ny marina dia ny fanolorana ny fahefan'ny mpanao lalàna amin'ny dokotera fotsiny mba hanafohezana sy hanamafisana ny dingana. Fanapahan-kevitra matihanina ny manapa-kevitra hoe inona no andraikitr'io olona io amin'ny toe-javatra toy izany sy ny mety ho fiverenany amin'ny fiainana. Ny fanapahan-kevitra na amin`ny toe-javatra toy izany dia heverina ho maty - dia fanapahan-kevitra madio. Tsy misy ifandraisany amin'ny zava-misy izy. Mifanohitra amin'izay nosoratanao, ny fanapahan-kevitra halakhic momba ny fiainana sy ny fahafatesana dia tsy "hafa amin'ny fanapahan-kevitra ara-pitsaboana". Ostrich fa tsy misy izany hoe "fanapahan-kevitra ara-pitsaboana" momba ny fiainana na ny fahafatesana. Fanapahan-kevitra madiodio (araka ny voalaza etsy ambony). Marina tokoa fa ny fanapahan-kevitra ara-dalàna dia mety tsy mitovy amin'ny halakhic, satria ireo roa ireo dia sokajy ara-dalàna (fa tsy araka ny zava-misy).
Miombon-kevitra tanteraka izahay fa tsy mpanao heloka bevava ny pelaka. Saingy azo antoka fa tsy manaiky isika fa tsy mpanao heloka bevava ny lehilahy miray amin'ny lehilahy miray amin'ny lehilahy (izay manao ny fironan'izy ireo). Miombon-kevitra izahay fa tsy heloka ny ataon'izy ireo, izany hoe fandikan-dalàna ara-moraly (nolazaiko fa misy ireo ao amin'ny toby ara-pivavahana izay mihevitra fa tsy anisan'izy ireo aho), satria tsy manisy ratsy ny hafa. Fa ny halakhic sy Torah dia mpanao heloka bevava, ka raha ny fomba fijery ara-pivavahana sy halakhic dia mpanao heloka bevava mitovy amin'ny hoe mpamono olona na mpanendaka (nefa mpanao heloka bevava ara-moraly ihany koa). Ny haavon'ny fahamelohana dia resaka hafa mazava ho azy. Eo no idiran'ny ambaratongan'ny safidy sy ny fanaraha-maso ananany ary ny haavon'ny fahatsiarovan-tena fa fandrarana izany (tsy heverin'ny olona laika ho tsy ara-dalàna izany mazava ho azy). Toy ny kleptomaniac manoloana ny mpangalatra mahazatra.
Zava-dehibe ho ahy ny manamarika fa momba ny fitsaboana ny homosexualité dia mbola malalaka kokoa noho ny nantenainareo aho. Amiko, na dia ireo izay tena mahatsapa an'io raharaha io aza dia manan-jo amin'ny fitondran-tena mahazatra eo amin'ny fiaraha-monina (raha tsy hoe manonja sy mitory an'izany izy, izay toriteny momba ny delestazy araka ny lalàna). Mpikambana ara-dalàna eo anivon’ny fiaraha-monina ny olona mpanao heloka bevava eo amin’ny sehatra misy azy manokana, indrindra raha ao anatin’ny toe-javatra sarotra iainany. Efa nanoratra momba izany aho taloha, ary azonao atao ny mijery ohatra Eto ary koa Eto. Nanontany tena ianao hoe nahoana no tsy niseho tamin'ny valinteniko tamin'ny gazety ny zavatra, satria ny hevitra navoakanao tao amin'ny lahatsoratrao ihany no nanehoako hevitra tao fa tsy ny votoatin'ilay raharaha. Raha hitanao ny fiandohan'ny valinteniko lava kokoa ao amin'ny tsanganana ny teo aloha Ny tranokalako, ho hitanao fa nanoratra mazava aho fa manaiky ny ankamaroan'ny fehin-kevitrao azo ampiharina. Indrisy anefa fa tsy navelan'ny rafitra hanitatra ny valin-tenin'ny gazety aho. Izany no nahatonga ahy nanao "fanatsarana sasantsasany" tamin'ireo tsanganana roa farany teto amin'ny tranokala sy tamin'ny fifanakalozan-kevitra taorian'izay (amin'ny resaka fiverenana).
Ary hamaranako amin'ny mimara notononinao ho "mpiara-miasa amiko", araka ny voalazanao (menatra mihitsy aza aho ny manonona ny anarako indray mandeha miaraka amin'ny goavambe siantifika toy izany). Sarotra tokoa ny manova na manapaka ny fitsarana an-tendrony. Saingy ny fanontaniana lehibe dia ny hoe raha ny amin'ny raharaha Didan tokoa ve izany dia fanavakavahana, na sao misy sanda hafa (ny sanda rehetra, anisan'izany ny anao ary mazava ho azy, dia fanavakavahana amin'ny lafiny iray). Ny fady sy ny toe-tsaina ara-tsosialy eo amin'ny fiaraha-monina ara-pivavahana manoloana ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy (izay raha ny hevitro dia tsy misy ifandraisany amin'ny fandrarana, satria tsy latsa-danja amin'izany ny fandrarana ny asa tanana amin'ny Sabata ary tsy mahazo fitsaboana toy izany) dia tena fanavakavahana tokoa raha ny hevitro (satria vinavina marina no atao fa tsy soatoavina fotsiny). Fa ny fiheverana ny homosexualité ho fandrarana dia tsy fanavakavahana fa norme halakhic (na dia mampalahelo aza raha ny hevitro). Miankina amin'ny finoantsika tsirairay avy ny toe-tsaina amin'ny fitsipika toy izany (raha ny fitsipika rehetra). Izaho manokana dia mino an'ilay mpanome Torah, fa raha nandrara izy dia mety misy olana amin'izany (izay tao anatin'ny fahantrako no tsy tsikaritro). Mametraka ny saiko ho amin'ny didiny aho. Fa satria fanontaniana momba ny finoana ireo, dia tsy tiako ny psychiatrie haka toerana, ary azo antoka fa tsy tapa-kevitra, momba azy ireo (tahaka ny mitranga amin'ny fiombonana eo am-bavan'ny zanak'olo-mpiray tam-po amin'ny Katolika), ary indro isika miverina amin'ny mety ary mila manasaraka ny psychiatrie amin'ny arrays. Ary ny amin’izany dia efa nilaza ireo rabyntsika (ibid., Ibid.): Omeo an’i Kaisara izay ho an’i Kaisara…
 Tsy maintsy milaza aho fa miaraka amin'ny lahatsoratra roa nosoratan'i Yoav Sorek, ny iray navoaka tao amin'ny fanampim-panazavana mitovy roa herinandro talohan'izay ary ny iray navoaka tao amin'ny tranokala fanampin'ny Shabbat (p. Jereo), ity no fifanakalozan-kevitra manan-tsaina sy manan-danja indrindra fantatry ny rehetra. ahy amin'ny gazety na amin'ny rehetra momba ity lohahevitra ity. Ho voninahitro ny fandraisana anjara amin'izany.
Momba ny fiviliana, ny fahaiza-manaony ary ny soatoavina - Valiny amin'ny lahatsoratr'i Prof. Yoram Yuval, "Tsy mivily izy ireo", Shabbat P. P. Akev Supplement (Tsanganana 25)
'Hefza' ao amin'ny Torah - valinteny amin'ny lahatsoratr'i Rabbi Yehuda Rak
Halacha sy ny zava-misy - inona ny fahaizana halakhic
Hevitra 8 momba ny "Ny fiviliana, ny fahaiza-manao ary ny soatoavina - Valiny amin'ny lahatsoratr'i Prof. Yoram Yuval, " Tsy mivily izy ireo ", Shabbat P. P. Akef - Tsanganana fitohizana (Tsanganana faha-26)”
30 Tishrei 10 - 2016/12/31 amin'ny XNUMX:XNUMX
Marihiko aloha fa tena nankafiziko ny taratasy sy ny lahateny, ny halaliny ary hatramin’ny fehin-kevitra izay ifanarahanareo amin’ny foto-kevitra.
Na izany aza, mbola tsy mahatsapa aho fa maninona ianao no miziriziry amin'ny famaritana ny fiviliana ho fironana amin'ny delestazy fa tsy ny fialana amin'ny mahazatra fotsiny? Ny ambaratongan'ny fiviliana amin'ny norme izay mitaky fitsabahana na fitsaboana dia tena sarobidy tokoa, fa ny tena fiviliana amin'ny mahazatra dia ara-dalàna.
Miala tsiny aho fa namerina an'i Foucault tamin'ny lahateny, fa ao amin'ny The Madness of the Age of Reason, i Foucault dia niresaka an'izany marina ary azoko antoka fa hitovy ny fanatsoahan-kevitra sy lohahevitra mitovy amin'ny fanavahana ny zava-misy (ny fivilian-dàlana amin'ny curve mahazatra) ary ny soatoavina (mivily isika rehetra na sarobidy ny katalaogy)
Tsy misy sakana amin'ny famaritana ny fiviliana amin'izany fomba izany. Ny famaritana dia raharaha aminao. Saingy heveriko fa tsy izany no famaritana ekena ary azo antoka fa tsy izay nokasain'i Rabbi Levinstein sy resahina eto. Noho izany, izahay (Yoram Yuval sy izaho) dia nanaiky ny tsy hamaritra izany amin'ny fomba matematika sy tsy miandany. Amin'ny fampiasana andavanandro "fiviliana" dia andian-teny misy dikany ratsy mazava. Araka ny soso-kevitrao dia nilaza zavatra tsy misy dikany sy tsy misy dikany fotsiny i Rabbi Levinstein, koa maninona no misy dinika momba izany?! Tsy misy fifandirana fa ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy dia mampiavaka ny vitsy an'isa amin'ny mponina. Ny adihevitra (miaraka amin'i Rabbi Levinstein) dia momba ny fitsaboana sahaza azy (eto koa i Yuval ary izaho dia manaiky, afa-tsy ny teny sy ny maha-zava-dehibe ny manam-pahefana matihanina amin'ny fifanakalozan-kevitra). Na izany na tsy izany, ny adihevitra rehetra eto dia eo amin'ny sehatry ny sanda fa tsy ny zava-misy-matematika.
Tsy azoko ny hevitrao momba an'i Foucault. Ny tenanay rahateo no namerina an'i Foucault tamin'ny kabary (rehefa nifanaraka tamin'ny toe-tsaina ankapoben'ny négatif momba izany), fa eto dia tena marina izy (famantaranandro mitsangana, sns.). Samy niombon-kevitra tamin'ny fanambaran'i Foucault (ao amin'ny boky nolazainao) izahay fa ny diagnostika ara-tsaina dia mifototra amin'ny tombam-bidy sy ny fiheverana ara-kolontsaina. Saingy heveriko fa izany indrindra no mahatonga ny mpitsabo aretin-tsaina tsy afaka manao ny satroka matihanina amin'ny adihevitra eto (satria soatoavina ireo fa tsy zava-misy).
Ity (ary ity ihany) no adihevitra eo amintsika amin'izao fotoana izao. Ny adihevitra mitovy tanteraka dia momba ny maha-zava-dehibe ny fahefan'ny mpitsabo amin'ny famaritana ny fotoana hahafatesana. Fa io ihany koa ny hevitra.
Ny olana ara-moraly amin'ny fandrarana rehetra momba ny firaisana ara-nofo, dia ny hoe tsy manota ny tenany ihany ilay olona fa manampy sy manatanjaka ny namany amin'ny fandikan-dalàna.
Rehefa voaorina ny fifandraisana voarara ary hitan'ny maro tsy misy henatra - dia ampiana ny haben'ny ohatra ratsy amin'ny maro sy ny fanambarana ampahibemaso fa azo atao izany, fanambarana izay misy fiantraikany manimba amin'ny ankizilahy izay mbola ao anatin'ny fanjakana fisalasalana, ary ny ohatra ratsy dia mety hanafintohina ny fandrarana.
Ny Isiraely rehetra dia mifamatotra, ary ny fihetsiky ny tsirairay dia misy fiantraikany amin'ny fitsipika manontolo. Enga anie isika rehetra mba samy hohamasinina sy hivoatra tsirairay amin’izay ilainy hatsaraina, ka hitondra tsara an’izao tontolo izao.
Misaotra, S.C. Levinger
Tamin'ny fanaovanao izany dia navadikao ho fandikan-dalàna ara-moraly ny fandrarana rehetra. Raha ny marina, araka ny fanoharana momba ny lavaka ao amin'ny sambo, na dia ny fandikan-dalàna tsy misy olon-kafa aza dia misy fiantraikany amin'ny anjarany. Ka araka izany ny Torah rehetra dia fitondran-tena.
Raha tsy hazavainao fa ara-moraly ny fandrarana ho azy, dia tsy misy dikany ny miresaka momba azy io ho moraly noho ny haben'ny tsy fahombiazana sy ny fahavoazana. Tautologie foko izany.
30 Tishrei 10 - 2016/12/34 amin'ny XNUMX:XNUMX
Ao amin'ny SD XNUMX Elul XNUMX
To Rabbi Avraham Neru - Salama,
Eny tokoa, ny fandikana ny sitrapon’Andriamanitra rehetra dia fahalotoam-pitondrantena, tokony ho voninahitry ny Mpamorona isika, na amin’ny maha ‘tompon-trano’ an’izao tontolo izao, na amin’ny fankasitrahana noho ny fahasoavany rehetra amintsika.
Amin'izay fotoana izay ihany koa dia misy fandraràna maromaro momba ny firaisana ara-nofo, izay manandratra antsika ho amin'ny fananganana fiainam-pianakaviana salama, tsy vitan'ny hoe voafehy ihany, fa amin'ny soatoavin'ny fitiavana, ny tsy fivadihana ary ny hatsaram-panahy, noho izany ny ray sy ny reny dia mahasoa ny tsirairay ary mamboly tsy misy farany. fitiavana sy fanoloran-tena.
Saingy ankoatra ny fanomezam-boninahitra ny Mpahary dia misy adidy fototra amin'ny fanajana ny ray aman-dreny. Hatraiza ny famoizam-po ho an'ny ray aman-dreny rehefa latsaka ao anatin'ny fiainana izay fandrarana mafy ny zanany iray manontolo, fiainana izay tsy misy fahafahana hananganana 'Taranaka sambatra' izay hanohy ny lalan'ny Jodaisma?
Ny olona iray izay mahafantatra ny habetsaky ny vola natolotry ny ray aman-dreniny ho azy sy ny ohatrinona no nahafoy ny ainy mba hitondrana azy ho amin'izao tontolo izao hitaiza azy sy hanabe azy - dia tsy maintsy manao ny ezaka rehetra mba hialana amin'ny toerana nianjerany.
Toy ny ray aman-dreny matetika mandalo fitsaboana sarotra, na ara-batana na ara-tsaina, mba hanana ny tombontsoa ny mamihina zaza, ary raha tsy mahomby amin`ity fitsaboana ity, andramo fitsaboana hafa, ary aza kivy - izao no anjara amin`ny zaza. izay nanana vola mitovy amin'ny vola ho an'ny ray aman-dreniny, tovovavy jiosy'. Izany no faran’izay kely azony omeny azy ireo noho ny soa rehetra nataony taminy.
Na ireo mpitsabo izay tsy matoky fa misy olona afaka miova aza dia milaza fa misy fahombiazana. Na dia matanjaka sy miavaka aza ny fironana homosexualité, izay tena sarotra ovaina amin'izay fotoana izay - hoy ny Dr. Zvi Mozes (ao amin'ny lahatsorany hoe: 'Mbola mandaitra ara-tsaina ve ny fitsaboana ny fironana mivadika', ao amin'ny tranokalan'ny 'Root') tapa-kevitra sy manana finoana matanjaka, afaka manomboka fianakaviana, miaraka amin`ny fanampian`ny fikarakarana matihanina mety.
Ny fananganan-jaza sy ny solon-tena, ankoatra ny tsy famahana ny olan’ny fandrarana, dia miteraka alahelo ho an’ireo ray aman-dreny izay nakana ilay zaza. Ny fampitomboana ny fitakiana fananganan-jaza ho an'ny mpivady mitovy taovam-pananahana dia tsy azo ihodivirana hitarika amin'ny fironana amin'ny asa fifanampiana hampitombo ny 'famatsiana' amin'ny fampiasana tafahoatra ny fananganan'anaka fa tsy hiezaka hamela ny zaza eo am-pelatanan'ny ray aman-dreniny.
Vao mainka aza ny hoe 'fisoloan-tena' dia fanararaotana ny fahorian'ny fianakaviana. Tsy misy vehivavy misaina handalo amin’ny fijalian’ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana, ka homena olon-tsy fantatra, fa ao anatin’ny fahasahiranana mafy ara-bola na ara-tsaina, ary iza no mahalala raha tsy tafiditra ao anatin’izany ny fikambanan-jiolahy sy ny fitondrana mpanao kolikoly?
Araka ny nosoratako dia mety ho marina avokoa izany rehetra izany nefa mbola hevitra tsy misy dikany amin'ny adihevitra. Ny fanontaniana dia hoe inona no toetran'ny fandrarana, fa tsy hoe misy lafiny moraly fanampiny.
Ankoatra izany dia misy fanamarihana sasantsasany momba ny vatan'ny zavatra:
Ny Mpamorona no namorona ny olona araka ny fironan-tsainy. Tsy azoko antoka fa mahita adidy ara-moraly amin'ny olombelona hanova izany aho.
2. Mety hisy ny fahasosoran’ny ray aman-dreny, nefa mety hisy toe-javatra tsy misy izany. Ahoana ary? Azla ny adidiny ara-moraly? Ankoatra izany, na dia tsy nanamarina aza aho fa heveriko fa misy mpivady mitaiza zaza miambina ny fasana toy izany. Heveriko fa "tsy misy vintana" dia fehezanteny mahery vaika.
3. Tsy « lavo » ny olona fa « tratra ».
4. Ireo hevitra rehetra ireo dia miresaka momba ny adidy hiova (raha azo atao), fa tsy manondro olana ara-moraly amin'ny hetsika.
5. Tsy voatery hanova ny fomba fiainany ny olona iray satria manelingelina ny ray aman-dreniny izany. Fantatra avy amin’ilay Riki voatonona tao amin’ny Rama Yod fa tsy voatery mankatò ny ray aman-dreniny ny zanakalahy iray rehefa mifidy vady, ary nanitatra izany aho tao amin’ireo lahatsoratro momba ny fanajana ny ray aman-dreny.
6. Betsaka ny mpitsabo izay mitatitra ny tsy fahombiazana sy ny fahasimbana mahatsiravina. Tsy niditra tao amin'ny fanontaniana aho hoe tsy mety miasa ve ny fitsaboana, fa namariparitrao ny toe-javatra tamin'ny fomba mamy loatra. Ny fepetra takiana amin'ny olona iray handray risika toy izany dia tokony ho miorina mafy. Ary indray, eo amin'ny sehatra ara-pivavahana dia misy tokoa ny fepetra toy izany, fa ny fahitana azy ho toy ny adidy ara-moraly dia tena mampisalasala aho. Tsy misy fankasitrahana manery ny olona iray hiditra amin'ny fijaliana mahatsiravina sy loza ara-tsaina toy izany. Ny hidiran'ny ray aman-dreny amin'ny fitsaboana fiovam-po izay hanova ny sainy sy hanala ny fahasorenana, dia mora kokoa sy tiana kokoa (moraly, fa tsy halakhic).
7. Ny fanehoan-kevitra farany dia filazalazana mitongilana sy mitongilana (ary mampiasa fiteny malefaka be aho). Mazava aminao fa raha tsy tena manohitra ianao ary amin'izao toe-javatra izao dia tsy ho hitanao izany. Fifanarahana eo amin'ny zokiolona ny solon-tena. Ary na inona na inona mety hitranga amin'izany dia tokony hiezaka sy hisoroka izany. Tsy manemotra ny hetsika mihitsy izany. Mety ho lany vola koa ny fanaovana asa soa ka mety hangalatra. Yigal Amir dia voalaza fa nanana finoana ara-pivavahana izay mety hitarika amin'ny famonoana olona sy ny fihetsika tafahoatra. Izany ve no antony tokony hialana amin’ny finoana ara-pivavahana?
Amin'ny maha-fitsipika, rehefa manangana karazana tohan-kevitra rehetra ianao ary noho ny antony iray dia ny tsirairay amin'ny teboka farany amin'ny lalana iray ihany, dia miahiahy aho ary mandinika indray ny fitsarako.
Raha tsy miditra amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny antsipiriany momba ireo hevitra rehetra natsanganao - tsy hanao afa-tsy fanehoan-kevitra iray momba ny risika resahina amin'ny fitsaboana fiovam-po aho.
Voalohany indrindra dia tokony ho takatra fa tsy ny fitsaboana rehetra atolotra dia mety, ary misy ny fitsaboana mety ho an'ny olona iray ary mety hanimba ny hafa, toy ny amin'ny zava-mahadomelina, izay manampy ny iray hitarika ny iray ho amin'ny vavahadin'ny fahafatesana. ka toy ny amin`ny fitsaboana ny zava-drehetra dia tokony hatao amin`ny psikology manam-pahaizana manokana hafa Fitsaboana tsara sy ny fanitsiana tsara ny toetry ny fitsaboana ny olona.
Ary faharoa, tokony ho mailo fa ny siansa dia tena mitsapatsapa ao anatin'ny haizina rehefa miresaka momba ny olana rehetra momba ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy (amin'ny ankapobeny, ny ampahany betsaka amin'ny haizina dia an-tsitrapo, manakana ny fikasana rehetra hivoahana, satria ny ny traikefa mihitsy dia hevi-diso ho ara-dalàna ny maha-homosexualité).
Ny iray amin'ireo loza lehibe ateraky ny andrana fanasitranana dia ny tahotra ny famoizam-po tanteraka noho ny tsy fahombiazan'ny andrana fitsaboana. Na izany aza, rehefa fantatrao mialoha fa ireo dia zava-baovao sy andrana fitsaboana - ny haavon`ny fanantenana dia tena antonony, ary araka izany ny fahadisoam-panantenana ny tsy fahombiazana dia tsy mampirodana ny olona. Ary fantaro fa izay tsy 'lasa' amin'izao fotoana izao dia mety hahomby rahampitso amin'ny lalana hafa kely, 'ary raha tsy rahampitso dia ny ampitso' 🙂
Amin'ny lafiny iray dia tsy maintsy miainga avy amin'ny fiantombohan'ny finoana isika fa nametraka fanamby lehibe ho an'ny olombelona Andriamanitra amin'ny fitadiavana fanafodin'io fironana mifanohitra amin'ny Torah io. Etsy ankilany, noho ny fahafantarana fa lavitra ny lalana ka tsy mbola nahitam-bahaolana mazava.
Izany no mitranga amin'ny olan'ny olombelona rehetra, rehefa miezaka mitady fanafodiny - mandroso. Indraindray dia mandalo am-polony taona, indraindray an-jatony, ary mihoatra noho izany aza, nefa aza kivy sy ela ary manohy mikaroka amin'ny lalana rehetra azo atao, mandra-pahatongan'ny fandrosoana tampoka.
Voalohany, tatitra avy amin'ny psikology manam-pahaizana ireo.
Faharoa, raha mbola tsy nahita fitsaboana sy zavona ny zava-drehetra araka ny voalazanao, dia inona no antenainao amin'ilay lehilahy? Ny fitondran-tena sy ny tsy ho pelaka raha tsy misy fitsaboana mahomby?
A. Mitadiava vahaolana.
Ny manam-pahaizana momba ny consulting sy ny famakiana literatiora matihanina, dia afaka mitondra fahalalana vaovao momba ny toetrany sy ny antony mahatonga ny olany ho an'ny olona iray, izay mety hahitany vahaolana vaovao ho azy manokana, angamba na dia ny torolalana tsy noeritreretin'ny manam-pahaizana aza.
B. Ataovy ho fanamby ny fahasarotana.
Tahaka ny ankafizin'ny olona manandrana mamaha olana manjavozavo ao amin'ny Gemara na ao amin'ny 'Edges'. Eto dia nahazo fanamby mahavariana ilay lehilahy - ny hamaha ny ankamantatra ny fiainany. Manontania tena hoe inona no manaitra ny fitiavany sy ny filany ary inona no mampitony azy? Fantaro hoe inona avy ireo toetra mampiavaka ny fitiavany ny namany? Ary angamba misy koa ny vehivavy manana toetra toy izany izay mety hanaitra ny fitiavany ary mety ho levona mihitsy aza ny fijanonan'ny firaisana ara-nofo amin'ny 'extra-gender'.
fahatelo. Ampitomboy ihany koa ny fahatsapana fangorahana amin'ireo 'mahitsy'
Ireo izay miatrika ny traikefa sarotra tsy zaka amin'ny fandehanana eny amin'ny arabe izay mifanena aminy tsy tapaka amin'ny vehivavy izay ny akanjo rehetra, na ny tsy fitafy, dia natao hanentanana ny sain'ireo izay mandalo eny an-dalana.
D. Mahalala 'pargan' ny tenany amin'ny fahombiazana rehetra, na dia kely sy ampahany aza.
Eritrereto hoe hatraiza ny fankasitrahan'ny Mpamorona azy amin'ny fahombiazana rehetra, sy amin'ny fandavana ny fihetsehana rehetra. Amin'ny voalohany dia hankafy ny fandavana ny instinct mandritra ny ora vitsivitsy; Taty aoriana nandritra ny andro vitsivitsy, ary taty aoriana mihoatra noho izany. Tahaka ny fiposahan'ny tsimatimanota ratsy ombieny ombieny, manomboka kely ary mitohy amin'ny be dia be, dia toy izany koa 'amin'ny ankapobeny' ny toetra tsara - mitohy hatrany mandraka androany!
Andriamanitra. Mirotsaka amin'ny zavatra mahaliana.
Fianarana, asa, mozika, asa an-tsitrapo sy ny sisa. Moa tsy izao va no nampianarin’i Farao, mpanjakan’i Egypta antsika: Aoka hanome voninahitra ny olona ny asa, fa aza mamonjy azy amin’ny lainga?
ary. Aza milentika ao anaty 'olana' foana.
Tena marina. Lasa 'identité' ilay 'olana'. Fantaro fa ny tsirairay dia samy manana ny filany sy ny fahalavony, ary mifanohitra amin'izany kosa, ny tampon'ny 'fahasoavana maro' dia betsaka sy ny fahombiazana. Tahaka ny momba an'i Ejipta momba ny tsy fahombiazana, tsy maintsy mifaly imbetsaka ny olona iray amin'ny fahombiazan'ny fiainana sy ny asa tsara, izay noho izy ireo tonga miaraka amin'ny alahelo sy ny fahasahiranana, dia tena sarobidy amin'ilay toerana.
P. 'Fa ny fifaliana avy amin'Andriamanitra no herinareo'.
Arakaraka ny ahatsapan’ny olona iray ny fanatrehan’Andriamanitra eo amin’izao tontolo izao no lehibe kokoa ny fifaliana ao aminy. 'Nangataka tamin'ny Tompo teo anatrehako mandrakariva aho, fa eo amin'ny ankavanana tsy ho lavo aho', ary araka ny nangatahan'ny mpianany hoe: 'Fa amin'ny fifaliana no hivoahanareo' - amin'ny fifaliana. Mizara amin’Andriamanitra ny hetsika rehetra eo amin’ny fiainana, amin’ny fanekena ny soa rehetra sy ny fangatahana ny tsy hita, ho an’ny tenany sy ho an’ny fiaraha-monina manontolo. Rehefa manatona ny fiainana miaraka amin'ny hafaliana sy ny maivana - dia manipy ny sakana rehetra.
Anisan’ny fototry ny fiatrehana amim-pahasahiana ireo, ary azo inoana fa misy olona afaka mahita torohevitra tsara kokoa avy amin’ny zavatra niainany sy ny traikefan’ny hafa manao hoe: ‘Aoka ny hendry sy ny hendry hahalala bebe kokoa’.
Miarahaba. Tsy nekeko ny fehezanteny iray nao. Saingy rehefa nanomboka naneho hevitra tamin'izy ireo aho (fampifangaroana miverimberina eo amin'ny fitondran-tena sy ny halakhah, ny fiheverana diso tanteraka momba ny fitondran-tena, sy ny sisa sy ny sisa), dia tonga saina aho fa tsy fifanoherana izany. Manafintohina fotsiny ny zavatra. Raha avelanao aho, dia heveriko fa ity tantara manaraka ity, izay henoko avy amin'ny Raby Shalom Shevdron indray mandeha, dia manazava tsara ny hevitra. Nilaza izy fa nahita ankizilahy iray nianjera teny amin’ny arabe ka naratra, dia naka azy ary nanomboka nihazakazaka nankany amin’ny hopitaly. Teny an-dalana, ny olona avy teo am-baravarankely sy ny mpandalo dia nikiakiaka niarahaba azy, toy ny hoe "Rabbi Shalom, fanafody feno" (amin'ny teny Yiddish, mazava ho azy). Dia nihazakazaka sy nihazakazaka izy ary naniry ny rehetra. Minitra vitsy taty aoriana dia hitany teo alohany ny vehivavy iray nandeha lavitra teo anoloany ary mazava ho azy fa niantsoantso taminy koa izy, toy ny olon-drehetra, "Raby Shalom, fahasitranana tanteraka." Nanatona tsikelikely izy ary somary nihena ny feony. Tamin'ny farany rehefa hitany hoe iza io (= zanany, mazava ho azy) dia nanomboka nikiakiaka tamin'ny horohoro izy. Tamin'io fotoana io dia tapitra ny faniriany sy ny toroheviny. Amin'ny dikan-teny maimaim-poana: Indray mandeha aho dia nahita lehilahy iray nijaly nandritra ny androm-piainany noho ny tsy fahatomombanana hatrany am-bohoka. Nandritra ny androm-piainany, rehefa nandeha mafy teo ambanin’ny entany izy, dia nilaza taminy ny rehetra hoe: “Tsy maintsy ataonao ho fanamby ny fahasahiranana”, na “Mahazoa hevitra momba ny toetranao”. Ny hafa aza nanome azy torohevitra maimaim-poana: "Avy amin'ny fahasarotana no hanorenana." Voalaza fa “Famaranana avy any an-tanàna”. Manampy izany hoe “mahaiza midera tena amin’ny fahombiazana rehetra, na dia amin’ny ampahany aza”. Ny hafa kosa tonga hatramin’ny fampandrenesana azy hoe: “Ny fangoraham-po ho anay tsy mijaly sy tsy nijaly noho ny fijalian’ny lasopy” (= tena mahafinaritra anao!). Na koa hoe "Mirotsaha amin'ny fikatsahana zavatra mahaliana, fa aza miditra ao anaty olana." Ary mazava ho azy fa “mahery ny fifalian’Andriamanitra”. Mehadrin avy any Mehadrin dia nanampy teto hoe: "Marina fa saika tsy misy olona mahomby, fa henoko fa ao amin'ny ranomasina dia misy ireo maka volamena an-jatony amin'ny karamany sy ny marary (raha nomena fanajana marina izy ireo mazava ho azy ary raha nandeha tany amin'ny tena matihanina izy ireo mazava ho azy) eny nahomby. Andriamanitra hanampy an’i Raby Shalom.” Tsy azoko antoka izay ho tsapanao raha sendra toe-javatra toy izao ianao ary misy olona hitondra anao izao torohevitra tsara rehetra izao. Fantatro tsara izay ho tsapako. Nahavita ianao ary nilaza fa afaka mahita torohevitra tsara kokoa avy amin'ny traikefany ny tsirairay. Lazaiko aminareo ny hany torohevitra tsara azoko avy amin'ny zavatra niainako mifandraika amin'ny toe-javatra toy izany: ny zavatra farany ilain'ny tsirairay dia toro-hevitra toy izany sy ny toy izany. Heveriko fa tsara kokoa ho azy ny manaiky ny marina sy milaza fa tsy manana hevitra izahay, fa inona no hataoko ary ny Raiko Izay any an-danitra no efa nandidy ahy (didy ara-pivavahana sy maloto).
Azo inoana fa ny tenin-dRaby Levinger dia lazaina amin'ny feo malefaka satria lavitra ny olana izy. Mety tsy hahatsapa ho toy ny renin’io zanany io izy sy ny hafa. Tsy midika akory izany hoe tsy valiny marina izany. Taorian'ny fangorahana sy ny fahasahiranan'ny zava-misy, ny teniny dia mamintina ratsy ny zavatra andrasana amin'ny homosexuel ara-pivavahana. Mihoatra noho izany - ny teniny dia mamintina tsy ratsy izay antenaina hataon'ny Jiosy tsirairay. Azo atao tsara ny mamindra fo amin’ny olona rehetra (fantatra ihany ny famindram-po), samy manana olana sy fahasahiranana isika rehetra, ary izany indrindra no tokony hitondran’ny Jiosy azy.
Voalohany, ny fisian'ny olona iray lavitry ny olana dia tokony hahatonga azy hanatona na tsy hiteny amin'ny fanavakavahana sy ny teny faneva toy izany.
Tsy ny valinteny fotsiny no noresahiko fa ny tononkalon’izy ireo. Saingy na ny valiny aza dia diso. Voalohany, tsy misy olana ara-moraly eto, ary teo no nanomboka ny dinika rehetra. Faharoa, tsy mahasoa ny ankamaroan'ireo torohevitra ireo. Ny sasany dia manolotra ny zava-misy amin'ny fomba mifantina sy mitongilana. Ny ampahany iray hafa dia mampionona azy amin'ny fampiononana tsy misy dikany. Ny olona mijaly ihany no afaka manapa-kevitra ny handresy an'i Kari ary mety hahomby izy, saingy tsy azonao atao ny manome azy torohevitra avy amin'ny lafiny izay ho resin'i Kari ary ny fifalian'Andriamanitra no fiarovana mafy ho azy. Ary avy eo ampio aminy koa fa maloto fitondran-tena izy satria nandiso fanantenana ny ray aman-dreniny sy ny Mpamorona azy.
Ankoatr'izay, ny vintana dia tsy ho vitany, toy ny tsy hahombiazan'ny tsirairay amintsika amin'ny toe-javatra misy azy. Nanantena ihany koa aho fa hisy reference amin'izany. Lazao azy fa tsy mahatsiravina izany, satria asa sarotra sy saika tsy ho vita izany. Izany dia fa tsy manonona andinin-teny poakaty sy manam-pahaizana manjavozavo nofantenana tamin'ny tsipìka fa tsy manampy azy (raha tsy hoe "professionals" izy ireo, tsy toy ny mpitsabo aretin-tsaina rehetra eran-tany, fa raha mino sy tapa-kevitra izy.
Raha namana akaiky ny olona toy izany ianao ary manana fahaizana mandrisika azy hanao hetsika hentitra kokoa sy hanohana azy - dia mety ho azo atao izany. Saingy tsy toy ny torohevitry ny sekoly ankapobeny amin'ny fiatrehana toe-javatra mahatsiravina toy izany.
Hiakatra eto tsy ho ela ny teniko, ary hazava kely eo.
Ny alakamisy lasa teo, nanontany ny Raby Michael Avraham Neru hoe "inona no tokony hataon'ilay lehilahy" mba hialana amin'ny toe-javatra misy azy. Ary nanapa-kevitra ny hanao sitrapo marina aho ary namaly ny fanontaniany araka ny fantatro sy ny zavatra niainako.
Amin'ny maha Jiosy an'i NH, izay, tahaka ny olon-drehetra, 'firifiry ny aventure hitany', nandalo krizy sy onja, fiakarana sy fidinana, sns., sns. - Afaka namintina ny fomba fiasa sy nieritreritra aho fa tsy maintsy nanao izany. manampy amin'ny fiatrehana ny olako, ary mety hanampy ny hafa hiatrika ny olany.
Tena adinoko ny teboka iray hafa, izay nipoitra tamin'ny teninao, ary angamba voalohany indrindra:
H. Mitazona fahatoniana sy fahatoniana amin'ny toe-javatra mampahory indrindra.
Inona no hanome ary inona no hahatonga anao ho tezitra? Rehefa manao zavatra noho ny tebiteby, ny fisafotofotoana ary ny 'stress' ianao - dia vao mainka ho tafiditra ao anaty fotaka ianao.
Fantaro àry ny tenanao, ary diniho tsara ny zava-misy. Hianatra ny lohahevitra ianao, avy amin'ny boky sy avy amin'ny matihanina; Ary tsy latsa-danja amin'izany, mianara ho an'ny tenanao: fantaro hoe inona no mampidina anao ary inona no mampiakatra anao? Inona no manelingelina ary inona no mampitony?
Raha ny marina, izao no ataon'ny psikology sy ny mpanolo-tsaina: miara-mipetraka aminao ary manaova 'aritmetika ara-tsaina' miaraka aminao, ary avy eo dia tonga amin'ny fahafantaranao ny fototry ny olana sy ny fomba hamahana azy.
Tsy mazava ny fanehoan-kevitrao momba ny 'renin'ny zaza', izay mihevitra ny fahasalaman'ny zanany. Niresaka momba ny fahorian’ny ray aman-dreny koa aho, noho ny olan’ny zanany lahy, na dia efa resin’izy ireo tao am-pony aza ny fitarainany.
Na Yitzchak aza, izay mandeha amin'ny didin'Andriamanitra mba hamatotra - ny fony dia malahelo noho ny alahelon'ny reniny izay 'nanova ny endriny, ny zaza teraka nandritra ny sivi-folo taona, dia natao ho an'ny afo sy hanina, malahelo ny reny. mitomany sy mitomany. Hotahiana anie isika tahaka an’i Joseph fa ny sarin’ny sarin’ny ray aman-drenintsika dia hijoro eo anoloantsika mandritra ny fitsapana sarotra.
Voalohany, na dia mijery ny manodidina ahy aza aho dia tsy mahita olo-marina izay tiany hotanterahina eto, dia tsy maintsy miala tsiny aho noho ny hamafin’ny zavatra nosoratako tao anatin’ny rivo-dozan’ny adihevitra. Toy ny mahazatra, hoy Andriamatoa amin'ny fanoharana sy ny fahalalam-pomba, ary izaho amin'ny heloko dia lehilahy mahery setra.
Raha ny fahitako azy dia tao ambadika no nisy ireo filazana nataonao momba ny fahalotoam-pitondran-tena tamin’ilay raharaha izay tsy nekeko mafy, ary namela soritra sy tombo-kase izany na dia tamin’ireo teny mangidy hafa tonga taty aoriana aza. Heveriko fa nisy ihany koa ny nilalao teo amin'ny fanolorana zavatra, ary toa nihatakataka kely tamiko izy.
Farany, mety ho azo atao ny mitady fanampiana amin'ny fanamarihanao ho an'ny olona iray izay tsy tapa-kevitra, saingy mbola heveriko fa tsara kokoa ny mametraka azy ireo amin'ny sehatra hafa kely, araka ny nomarihiko nandritra ny fifanakalozan-kevitra.
Salama daholo ary miala tsiny.
Lazao amin'izay mijaly :: Very ianao. Tsy manana fahafahana ianao. Tsy misy dikany mihitsy ny mankany amin’ny hopitaly. Mandehana mivantana any amin'ny fasana.
Dia mitaraina momba ny famonoan-tena. Ary angamba ny olona tsara karazany aminao dia mitondra ny marary ho amin'ny famoizam-po sy hamono tena?
Misy fomba hafa koa. Azo atao ny manome azy ireo torohevitra azo ampiharina (na dia misy aza indrisy fa kely dia kely, ary mendrika ny hanazavana azy am-pahatsorana fa tsy fotsy), fa raha tsy misy ny torohevitra dia tsy ireto toro-hevitra ireto, ary raha tsy misy ny fampiononana feno olana natolotrao dia vao mainka mampitombo ny fahasorenana ( sady manamafy ny fifalian’Andriamanitra).
Ary azo antoka fa tsy mety ny mandoko azy ireo amin'ny sary rosy sy tsy azo ianteherana (toy ny hoe mpitsabo tsy matihanina ireo tsy fahombiazana ireo, ary toy ny hoe mahomby ny mpino).
Ary na dia tsy marina aza ny manazava amin'izy ireo fa maloto fitondran-tena izy ireo satria ny ray aman-dreniny dia nametraka vola ho azy ireo ary ny Mpamorona azy dia manantena azy ireo ary tsy nahomby izy ireo ary notezaina tamin'ny finoany. Sao sangisanginao izany? Toy izao no famaliana ny fahoriana (R. Barar sy Yitzha AA, XNUMX)?
Ary koa momba ny fiheverana ny fitondran-tena izay nasehonao. Ary raha tian'ny ray aman-dreniko hitondra zato kilao eo an-damosiko mandritra ny androm-piainako aho dia tsy maintsy manao izany noho ny fankasitrahana? Misy fiampangana ara-moraly ve izany? Efa nampahatsiahy anao ny momba an'i Maharik momba ny fisafidianana vady aho. Lazaiko fa moraly no resahina fa tsy halakhah. Tsy maintsy misy fiampangana halakhic toy izany. Fa ny filazana fa misy fiampangana ara-moraly? Ny famelan-keloka, miolakolaka fotsiny. Amin'ny ankapobeny, ny fankasitrahana an'Andriamanitra dia tsy tsotra mihitsy, ary raha ny hevitro dia tsy an'ny moraly fa an'ny filozofia. Jereo ny lahatsoratra eto:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/מעבר Amin'izany rehetra izany dia zava-dehibe ny fampiononana azy ireo fa na dia tsy mahomby aza izy ireo dia saika ny olon-drehetra ihany koa no tsy hijoro amin'izany. Ary efa hitanay tao amin'ny Ketubot Lag raha tsy noho ny azy Hanania Misaela sy Azariah nampifandray ampahany amin'ny mpaka sary, voatonona tsara ao amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny fijaliana malefaka mitohy sy ny fijaliana lehibe nefa eo an-toerana sy vetivety.
Ny teny momba ny mety ho fahombiazana dia ny tenin'ny Dr. Zvi Mozes, talen'ny Shiloh Institute, iray amin'ireo matihanina ambony amin'ny sehatra misy antsika. Ary milaza mazava izy fa raha toa ka sarotra be ny fironana mazava hiova, fa ny olona tena tapa-kevitra sy manana finoana matanjaka dia afaka hahomby amin'ny fitarihana matihanina.
Zavatra mazava ny tohin'ny teniko. Heverinao ve fa ny Raby Kolon dia nikasa ny hamela ny olona hanambady ho tsaroana? 🙂 Iza no namela ny lehilahy hanaraka ny ray aman-dreniny teo amin'ny alitaran'ny filany? Raha tsy mandositra any an-dapa izy dia mitafy mainty sy mifono mainty, sns. ”ary tsy hanimba ny fiainan'ny ray aman-dreniny amin'ny alahelo mahatsiravina.
Tsy misy voavonjy amin’ny fahoriany amin’ny fahoriana. Anontanio izay mpiasa sosialy dia holazainy aminao
, Ny fototry ny singa dia ny manala ilay olona amin'ny fihetseham-pon'ilay niharam-boina. Raha vao mandray ny andraikiny amin'ny anjarany ny olona iray - dia efa hahita ny fomba hanavotana azy izy. Ary raha manafintohina - dia manafintohina ihany koa, ny fitenin'ny fahatezerana ..
Amin'ny fanajana rehetra ny "secteur-tsika" dia tsy miraharaha ny toerana hafa tanteraka ianao izay saika marimaritra iraisana amin'ny matihanina ankehitriny (tsy manam-pahaizana aho ary manana ahiahy ihany koa momba ity marimaritra iraisana ity, ary mbola tsy miraharaha izany amin'ny alàlan'ny penina fotsiny aho. satria hoy ny Dr. Izao sy izao). Ambonin'izany, na dia ny teniny aza, fara faharatsiny, araka ny nanononanao azy, dia tena misalasala. Azoko lazaina koa fa raha tena mino ianao ary tena tapa-kevitra ary tsy feno ny fironanao dia afaka mandresy ianao. firy no misy? Ary firy ny hafa? Firy amin'izy ireo no nahomby? Nanome isa ve izy? Ny siansa dia miasa amin'ny tombantombana quantitative fa tsy amin'ny teny filamatra (angamba izy no nampiakatra izany rehetra izany, fa ny zavatra nolazainao dia tsy hitako mihitsy).
Mazava tokoa ny tohin'ny fanamarihanao, toy ny teo alohany. Iza teto no nilaza fa nikasa ny hamela fahatsiarovana ny Maharik? Ary iza no mifampiraharaha amin'ny mpitsara?! Raha tsy azonareo dia hazavaiko ny fitakiako. Ny fomba amam-panao dia manana adidy ara-moraly amin'ny fanarahana ny andrasan'ny ray aman-dreny satria niteraka ahy izy ireo ary nampiasa vola tamiko. Ka raha angatahin'izy ireo aho hanambady vady fa tsy anonyme - araka ny hevitrao dia tokony ho nankatò azy ireo aho, sa tsy izany? Mazava ho azy izany. Inona anefa no hatao, hoy izy hoe tsia (ary toy izany koa no nanjaka tao amin'ny Rama). Aiza ny moraly eto? Dikany: Tsy misy adidy ara-moraly ny mankatò ny ray aman-dreny rehefa mifidy vady. Tsy manan-jo hitaky ahy momba ny fiainako izy ireo. Inona àry no zava-dehibe raha tsaroana na tsia? Ny maha samy hafa azy ireo dia halakhic, fa ianao niresaka momba ny adidy ara-moraly ny manaraka ny fitakian'ny ray aman-dreny, ary amin'ity raharaha ity dia tsy misy fahasamihafana. Mifanohitra amin'izany, ny fisafidianana vehivavy ho solon'ny lahy dia fijaliana lehibe ary saika tsy ho vitan'ny zanaka lahy, fa ny fanoloana vady iray amin'ny iray hafa dia zavatra mora tsy manam-paharoa. Koa nahoana izy no tsy voatery hanao izany? Ary amin'ny fiteninao: iza no namela ny lehilahy hamatotra ny ray aman-dreniny ka hahatonga azy ireo ho ratram-po mahatsiravina eo amin'ny alitaran'ny filany izay mitarika azy ho amin'ny vady tiany. Iza no hanindrona ny filany sy haka vady hafa ary hahatonga ny ray aman-dreniny ho afa-po indrindra. Ary amin'ny ankapobeny, raha tsy mahazo aina sy sarotra ho azy izy - aoka izy ho tapa-kevitra sy hino ary mankanesa any amin'ny Dr Moizy fa hanampy azy handresy. Inona no olana?
Ary ny amin'ny fiafaran'ny teninao dia hahita fomba hamonjena ny olona voan'ny kansera raha azo inoana ny tenany. Ary toy izany koa ny marary mitaiza rehetra. Ireo dia teny filamatra izay tsy isalasalana fa tsy firaharahana sy fahadalana New Age mampisalasala. Miverina amin'ny tantaran'i Rash Shevdron aho. Mora ny miteny rehefa miresaka momba ny hafa tsy miraika ianao. Anontanio izay mpiasa sosialy dia holazainy aminao izany.
Andeha isika hanomboka amin'ny farany:
Tsy niteny aho hoe tsy maintsy ho voavonjy ny olona voan'ny kansera. Hoy aho hoe misy olona marary mafy toa tsy azo sitranina, mitady fanafody. Ary hoy Hezekia mpanjaka, mpaminanin'Andriamanitra, taminy: Fa maty ianao ka tsy ho velona. Nikaroka sy nikaroka ianao, mandray ny fitsaran’ny lanitra am-pitiavana, nomena alalana ny mpitsabo mba hanasitrana – tsy ho kivy.
Misy Jiosy malala iray, R. Cohen-Melamed, izay voan’ny dystrophie hozatra, 15 taona mahery lasa izay, ary nilaza taminy ny dokotera iray avy eo fa volana vitsivitsy sisa no ho velona.Tsy nihaino azy ny Dr. Melamed. ary mbola velona mandraka androany ary manoratra boky Nandritra izany fotoana izany dia nahavita nanatrika ny fandevenana ny dokotera izay nanome toky azy ny amin'ny fahafatesany tsy ho ela izy):
Momba ny fironana -
Tsy tonga hanao dinika filôzôfika sy siantifika aho, eny, azo atao ve izany? - Tsy misy afa-tsy endrika iray ihany no hitako eo anoloan'ny masoko, ilay tovolahy sahiran-tsaina sy sadaikatra teo anelanelan'ny fironany sy ny finoany. Tsy misy fomba eto amin'izao tontolo izao hivoahan'ny mpamorona sy ny mpamorona azy. Ny hany azony hivoahana amin'ny korontana dia ny fitadiavana vahaolana, ary miezaka mitady ny adiresy aho izay mety hamahana ny olana.
Somary matahotra ny 'torohevitra ara-tsaina' aho, noho ny antony maro: be fanantenana loatra izy ireo, ary mety ho latsaka ao anaty famoizam-po ny lehilahy iray izay tonga miaraka amin'ny fanantenana ambony ary indrindra ny fiandrasana fahombiazana eo no ho eo. Ankoatra izany, misy ny mpitsabo sasany izay mpilatsaka an-tsitrapo tsy matihanina. Ary ho an'ny 'fomba miverimberina' azy ireo, izay miezaka ny 'hamatanjaka ny maha-lehilahy' - tsara ho an'ny tranga sasany ihany, ary toa tsy izany no anton'ny tranga rehetra.
Izany no nahatonga ahy nitodika tany amin'ny Dr. Zvi Mozes, izay tsy fantatro manokana, fa ny fomba fiheviny be fanantenana nefa tena mitandrina - dia manentana ny fanantenana feno fitandremana ato anatiko. Niaraka taminao, dia nanonona azy fohifohy aho. Ao amin'ny fanehoan-kevitro momba ireo lahatsoratra roa nosoratan'i Yoav Sorek, dia sahirana aho nandika andalana roa lehibe tao amin'ny fanamarihany izay manazava ny mety sy ny mety ho azony (satria 'Rohy' tsy haiko ny atao, mandritra izany aho 'Linkopov' dia tsy azo sitranina :).
Tsy mandeha an-tongotra ny traikefan'ny mpitsabo efa za-draharaha eny an-kianja… ary adidintsika ny mampahafantatra ny mbola tsy tapa-kevitra momba ny fisiany, sy ny fahafahana mitady fanampiana avy amin'izany.
Manjavozavo tanteraka ny fandikanao ao amin'ny Maharik fa ny zanaka dia tsy manana trosa amin'ny ray aman-dreniny. Raha ny fahitako azy dia misy ny mahazo fa momba ny hasin'ny raim-pianakaviana nolavina noho ny didin'ny zanaka hanambady vehivavy io, fa raha mahita vehivavy kosher izy ka tia an'i Man Mifi dia hahita azy? Dr Moses dia afaka manampy lehilahy iray izay te-hanao Kono te hiala amin`ny fanambadiana voarara, fa hiala amin`ny fanambadiana tsara ho any an-danitra sy ny olombelona - Sanatria.
Ary na ahoana na ahoana, na dia avela sy nodidiana hanambady araka ny safidin’ny fony aza ilay tovolahy, mifanohitra amin’ny sitrapon’ny ray aman-dreniny, dia tsy maintsy miteny amin’izy ireo zavatra tsara sy mampahery, amin’ny fahalemem-panahy sy ny fanajana rehetra izy. Ny hilaza amin’izy ireo hoe: ‘Ry ray aman-dreny malala, tiako sy ankamamiako izay rehetra nataonareo ho ahy, ary azoko antoka fa hahazo fifaliana masina amin’io tovovavy sy vehivavy be herim-po io ianareo. Ary matetika na dia tsy mihavana avy hatrany aza - dia hihavana rehefa teraka ny zafikeliny.
Inona no hahafaly azy ireo amin’ilay fandrarana an’i Kreta izay noforonina antsoina hoe ‘fahavetavetana’?
Nanoratra fialan-tsiny tao amin'ny tranokala aho noho ny hamafin'ny teniko, ary averiko eto koa izany (tsy azoko ny antony anaovana azy amin'ny fantsona roa. Tsy hitako eto izay mitaky tsiambaratelo tafahoatra. Tsapako fa ny sasany diso ny resaka nivily tany amin'ny mailaka ato).
Raha ny zava-misy, ny tena nanelingelina ahy dia ny contexte, saingy tsy mitovy hevitra amin'ny votoaty aho. Ary ny karazana karazana anao dia ho voahitsakitsaka.
Raha ny momba ny Maharik sy ny hevitra momba ny fanajana ny faritanin'ny hafa, jereo ny fanamarihako ao amin'ny lahatsoratra eto:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA/בכל Ny fomba, mazava ho azy fa ny fomba fiteny amin'ny ray aman-dreny dia tokony ho fanajana.
Salama daholo ary miala tsiny
Ao amin’ny S.D. XNUMX ao amin’ny Elul, p
Ny resadresaka nataoko vao haingana niaraka tamin'i Rabbi Avraham izay nitranga teo aminay tao amin'ny mailaka manokana, ary nampidirina tao amin'ny tranokala androany hariva - dia tsy nokasain'i Maikra havoaka ao amin'ny tranokala, ary tokony horaisina ho toy ny 'drafi-drafitra', izay tsy voatery hoe maneho fehin-kevitra mirindra.
Miala tsiny aho amin'ny tsy fifankahazoana. Rehefa nanoratra aho dia nieritreritra fa tsy nety ny nandehanany tamin'ny mailaka mahazatra fa tsy tany amin'ny tranokala, ary tsy hitako izay nivadika tamin'ny lahateny natao teto amin'ny tranokala, ka nalefako izy ireo (amin'ny fotoana tena izy. ) mba hampidirana ao amin'ny tranokala. Izao vao tonga izy ireo satria izao vao vita ny adihevitra. Ary tena ny lahatsoratra farany teo amintsika rehefa tsapako fa tsy natao ho eto dia tsy nampidiriko. Na izany na tsy izany, miala tsiny indray.
Ho an'ny Raby MDA hendry, izay feno fahendrena sy siansa, toy ny mpahay toekarena azo itokisana sy sahy, Delbish Mada, mba hianatra ny Torah sy hampianatra azy, ary satro-boninahitra amin'ny lafiny rehetra, marina sy mendri-kaja - dia haverina amin'i Hadada ny fiadanany, ary hitombo ny Torah sy ny taratasy fanamarinana, hanazava ny mason'ny mpiara-belona! - Fiadanana sy famonjena lehibe,
Mitaky bebe kokoa amin'izany aho, nahoana ny tanàna no marina momba ny olana fa ny fitsaboana ara-psikolojika matihanina dia mitaky fandaniana ara-bola goavana, izay manakana ireo izay mila izany indraindray, ary manasarotra azy ireo ny maharitra miaraka amin'izy ireo.
Tao Kochav Hashahar sy ny manodidina, nahita vahaolana izy ireo tamin'ny fananganana tahirim-bola antsoina hoe 'Chaim Shel Tova' (tarihin'ny Raby Natan Shalev, raby ao Mevoot Jeriko), izay manampy amin'ny famatsiam-bola ho an'ny fianakaviana sy ny mpivady ara-tsaina ho an'ireo sahirana.
Mendrika ny handray an’io hetsika io isaky ny fokontany sy ny faritra, ary ny fametrahana vola mitovy amin’izany izay hamporisika sy hanampy amin’ny fikarakarana ara-pahasalamana matihanina ho an’ny tsirairay sy ny ankohonana.
Niteny tamin'ny tanin'ny Joda an'arivony ilay tovolahy, ho valin'ny tànany feno fanajana,
Shalev sy Yesha Rab ho an'Andriamatoa Chen Chen noho ny faniriany sy ny heviny.
Ary ao aminy sy ato anatiko no hihazonantsika ny tsimparifary ao anatin'ny tafio-drivotra, ny tehin'ny kapiteny dia mihodinkodina. Raha misy Romana miteny aminao ny sabatra sy ny aya, dia fantaro fa Jerosalema teo an-tampon-kavoana no naorina.
Hahazo an'i Lior amin'ny fahazavan'ny hazavana isika, ary ho voavonjy amin'ny didy feno habibiana rehetra. Ny lehilahy iray amin'ny rahalahiny dia hiteny mafy, dia ny zanakalahy sy ny zanakavavy miaraka amin'ny mpanompo sahirana. Ary hanao sonia fangatahana ho an'ny mponina iray nampijaliana aho, izay hosoniavinay amin'ity taona ity.
30 Tishrei 10 - 2016/12/35 amin'ny XNUMX:XNUMX
Ny fifanakalozan-kevitra momba ny lohahevitra dia ho hita amin'ny lohataona ao amin'ny lahatsoratra:
Roni Schur, 'Azo atao ny miova (amin'ny fitsaboana ny fironana mifanohitra amin'ny' Advice of the Soul '), Tzohar XNUMX (XNUMX), ao amin'ny tranokala' Asif ';
Raby Azriel Ariel, 'Misy afaka miova ve? (Valiny) ', any, any;
Dr. Baruch Kahana, 'Religion, Society and Reverse Tendencies', Tzohar XNUMX (XNUMX), ao amin'ny tranonkala 'Asif'.
Dr. Zvi Mozes, 'Mahomby ara-tsaina ve ny fitsaboana ny fironana mivadika', ao amin'ny tranokalan'ny 'Root'.
Famintinana amin'ny antsipiriany momba ny karazana fitsaboana sy ny toerana mamatotra sy miiba - ao amin'ny Wikipedia, ny fidirana 'fitsaboana fiovam-po'.
Nahazo ny valin'ny fiaraha-monina psychoanalytika teo amin'ny Isiraely aho tamin'ny "tenin'ny raby":
Amin'ny maha psychoanalysts izay manokan-tena amin'ny fahatakarana lalina ny sain'olombelona sy manampy amin'ny fahoriany amin'ny alàlan'ny fitsaboana ara-tsaina, dia heverinay fa adidinay ny manohitra ny fanambaràna fanararaotana nataon'ny raby vao haingana momba ny vondrom-piarahamonina LGBT. Ny filazana fa fikorontanana ara-tsaina ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, "fiviliana", "fahasembanana mila fitsaboana ara-tsaina", dia fanitsakitsahana lehibe ny fahamendrehan'ny olombelona sy ny fahalalahana - ary mifanohitra amin'ny toerana maoderina ekena sy ny fahalalana matihanina amin'izao fotoana izao momba ny fironana ara-pananahana sy ny maha-izy azy. Ny fanaovana 'diagnose ara-tsaina' ataon'ny raby sy ny mpanabe tsy voaofana amin'izany dia tena tsy mety ary tena hitantsika fa tena mampidi-doza ho an'ny fanahy sy ny fiainan'ny tanora sy ny ankohonany ny fanehoana hevitra toy izany.
Yossi Triast (Filoha) - amin'ny anaran'ny Fikambanana Psychoanalytic ao Israely
Ary manontany tena aho hoe vendrana ve ilay lehilahy sa mpandainga. Ny zavatra soratany dia tsy misy dikany mazava ho azy. Mety manana toerana iray izy amin'ny fanontaniana hoe fikorontanana ve ny homosexualité na tsia, saingy tsy misy ifandraisany amin'ny fahalalana matihanina mety ho azony. Dia toa adala izy. Na dia mety ho fanararaotana niniana ny satrony matihanina aza izany mba hampiroboroboana ny fandaharam-potoana misy lanjany, dia mpandainga izy avy eo. Avelako hisafidy amin'ireo safidy ny mpamaky.
20 Tamoz 07 - 2020/14/43 amin'ny XNUMX:XNUMX
Heveriko fa tsy voatery ho adala izy. Misy ny tsy fahampian'ny fahatsiarovan-tena manelingelina, ary miseho amin'ny olona manan-tsaina koa izany. Raha manasa ati-doha amin'ny zavatra lava ianao, dia manomboka mieritreritra fa marina sy tsy mety ritra izany. Indrisy anefa fa mitranga kely izany.
20 Tamoz 07 - 2020/15/00 amin'ny XNUMX:XNUMX
Namaly Pingback aho teo
Fingback: Fantaro ny manam-pahaizana Amin'ny fitsipika sy ny antsipiriany
Miaraha misoratra anarana 3,091 fanampiny
Doron On Fikambanana mpanavakavaka ve ny Lehavah? (Tsanganana 484)
mikyab On Valiny ny toriteny nataon'ny olon-kendry - Beer Hagola